Chipikisi chokushongedza chemvura chinowedzerwa chemvura chemvura, mutungamiriri wepane weMetal grid fekitari - China Boegger
Uri pano:Musha > Products > Architectural Mesh > Mhoteredzo Yepuro>Mvura yesimbi yakawedzerwa
Mvura yesimbi yakawedzerwa inogonawo kuitwa necarbon simbi, simbi risina simba, aluminium, mhangura, rindari, zvichingodaro. Muupenyu hwedu hwazvino uno, mune vanhu vakawanda vanosarudza kushandisa simbi rakawedzerwa senzvimbo yacho nemhaka yechitarisiko chakanaka. Kunze kweizvozvo, nezvinhu zvemhepo yakanaka, dzivisa chikamu chezuva, kuderedza ruzha uye kubvunza mvura yacho, rinogonawo kushandiswa munhandare, nhoroondo, chikoro, muraibhurari, chipatara, chivako chehofisi, chirimo chikuru uye zvichingodaro.
Mashoko eAluminium Akawedzerwa
Simbi Risina Mvura Rinowedzerwa
L zvinhu: carbon simbi rakaderera, simbi risina simba, aluminium magnesium alloy, aluminium, mhangura, brass, titanium, nickel.Kutsanangurwa kwemvura yesimbi yakawedzerwa
Ine mushonga: PVC plastic yakafukidzwa, inopisa, ine magetsi.
In the youfu: 0.4 mm kusvika ku0.8 mm.
L Mesh: 8 × 16 mm, 10 × 20 mm, 2 × 25 mm, ruzivo charo runogona kuitwa.
I Chitarisiko chakanaka nechimiro chakatsva nezvokushongedza.Mativi epamusoro wesimbi akawedzererwa
Ndiri simba rakaisvonaka kumuverengero wokurema.
Ini kudzivisa zuva kuti rivheneke ziso romunhu.
L Mhepo yakanaka, kurwisana nayo.
Ndinoderedza ruzha ndokudura mvura yacho.
Ndine uremu hwakasimba, huri nyore kuisa.
Kushandiswa kwemvura yesimbi yakawedzerwa
Chifuko chesimbi chinowedzerwa chinoshandiswa zvikurusa sokusangana kwamafuta muzvivako zvekutengeserana nezvivako zvehurumende zvakadai senhandare, tsvene, chivako chehofisi, Muti mukuru uye zvichingodaro.
Mvura yesimbi yakawedzerwa nokuda kwokuvaka hofisini
Mvura yesimbi yakawedzerwa nokuda kwechivako chemiti
Tevere:Mwenzi dzinoshongedza wiaya
Taga: metal grid panels, wire mesh panel, expanded metal facade,
Kuderedza zvisakiso uye mhinduro dzemvura dzesimbi dzokurwisa
ZVINOTAKA ZVINOKUNZWA ZVIKUNZO ZVINOKUDZIDZWA, ZVIMWE ZVINOKUNGA ZVIMWE ZVIKURU
Nzira yokugadzira nayo mapepa egrid refuti
Kurapwa kwakabatana kwokuvakwa kweWire mash